Translate French to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate French to Myanmar (Burmese), French to Myanmar (Burmese) translations, French to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Salut comment allez-vous မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Y a-t-il quelqu'un? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Je t'aime vraiment tellement ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Combien coûte ce hamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Pouvez-vous m'appeler un taxi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
je suis désolé ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Je suis intéressé ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Mon volaété retardé အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Je suis là pour affaires ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Bonjour, mon nom est မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Je suis désolé, mais je suis marié ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Je voudrais vous demander ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Pouvez-vous m'amener à l'aéroport? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Quelle heure est-il maintenant? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Où se trouve le poste de police le plus proche? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Puis-je emprunter votre chargeur de téléphone s'il vous plaît? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Pouvez-vous m'aider? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Commandez-moi un verre, s'il vous plaît? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Combien ça coûte? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Je suis allergique au gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Appelle un docteur ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Y a-t-il un médecin? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Puis-je avoir un appel? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Appelez-moi votre patron s'il vous plaît. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Cet endroit est très agréable ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Emmenez-moi à l'hôtel s'il vous plaît ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Quel est mon numéro de chambre? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?